Sida loo muraayad-geliyo kombuyuutarkaaga shaqsiga ah iyada oo ay ku mahadsan tahay Chromecast | Androidsis
Tilmaamaha soo socda ee fiidiyowga ah, waxaan rabaa inaan ku sharxo habka saxda ah ee aan ku qasban nahay muraayad ka dhig kumbuyuutarradeena shaqsiyadeed mahadnaqa Google's #Chromecast, a qalab noo siiya fursado badan oo keliya 35 euro.
Casharradi hore, waxaan ku sharaxay habka loo suuragaliyo muraayadda shaashadda ama muraayadda shaashadda. Tuur qalabka aan markii hore la taageerin ugu talagal ahaan barnaamijka rasmiga ah ee Chromecast. Casharradan cusub, waxaan ku tusayaa sida loo xoojiyo muraayadda wax kasta oo ka dhaca shaashadda kombuyuutarkayaga shaqsiyeed oo kaliya kuma koobnaan doonno inaan muraajaceyno biraawsarka Google Chrome.
1 Maxaan ka helaynaa iskudhafka guud ee muraayadda kombiyuutarka shaqsiyadeed?
2 Kombiyuutarkayga shaqsiyeed miyuu taageeraa muraayadda buuxa ee Chromecast?
Maxaan ka helaynaa iskudhafka guud ee muraayadda kombiyuutarka shaqsiyadeed?
Mabda 'ahaan fidinta is waafajinta ee loogu talagalay Google Chrome, dhammaantood waxay ku yimaadaan asal ahaan awood u siinta inay sameeyaan muraayadda tabka biraawsarkayaga, inkasta oo xeeladdan ama ikhtiyaarkan si qarsoodi ah loogu qariyey goobaha codsiyada, waan sameyn karnaa dhammaystirka muraajicinta wax kasta oo ka dhaca kumbuyuutarkeena shaqsiyeed.
Kaliya waa inaan raacno tillaabooyinka aan kugu tusinayo fiidiyowga dusha sare ee maqaalkan, oo ah cashar bixin, iyo daqiiqado yar gudahood waxaan ku arki doonnaa wax kasta oo ka dhaca kumbuyuutarkeena shaqsiga ah, toos toos ah shaashadda TV-ga, gebi ahaanba wireless ayaa ugu mahadnaqaya Chromecast-keena.
Kombiyuutarkayga shaqsiyeed miyuu taageeraa muraayadda buuxa ee Chromecast?
Jawaabtu waa HAA, waa HAA, oo taasi waa in ikhtiyaarka ama shuruudda kaliya ee ay tahay inaan fulino ay tahay tan ku rakib Google biraawsarka Chrome kumbuyuutarka shakhsi ahaaneed ee aan dooneyno inaan ku xoojino muraayadaha buuxa. Waxaas oo dhan iyadoon loo eegin nidaamka qalliinka ee aan ku rakibnay kombuyuutarkeena shaqsiga ah, waana inaan xusuusnaano inaan haysanno noocyo Google Chrome ah oo loogu talagalay dhammaan nidaamyada hawlgalka maanta.
Marka hadda waad ogtahay, haddii aad xiisaynayso inaad muraayad ka dhigto wax kasta oo ka dhaca shaashadda kombiyuutarkaaga, ma seegi kartid fiidiyowga aan wax walba kuugu sharraxayo, wax walba oo timo iyo calaamado leh.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » #Chromecast: Sida loo muraaqeeyo kombiyuutarkaaga gaarka ah
"... waana inaan xasuusnaano inaan haysanno noocyada Google Chrome dhammaan nidaamyada hawlgalka maanta" ee daaqadaha RT ma jiraan.
Aaway iskuxirkii fiidiyowgaas ???
Muraayadda shaashadda PC-ga ma shaqeyneyso. Fiidiyowgaagana ma muujineysid. Tuhunsan.
Miyaad naxariis badnaan lahayd inaad doqon iga dhigto adoo dhajinaya fiidiyoow aad muraayad u tahay? Mahadsanid! 😀
Ku jawaab k0an
Xayeysiiska ugu horeeya ee Amazon Fire Phone waa wax lala yaabo